ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: လက်ရှိ ABSDF ဥက္ကဋ္ဌ ၏ ဇနီး မခင်ရွှေလှိုင် သို့ ကိုချိုကြီး (ခ) ကိုဖရယ်ဒီအောင်သန်း ၏ညီမ မမသင်း မှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ - ၂
လက်ရှိ ABSDF ဥက္ကဋ္ဌ ၏ ဇနီး မခင်ရွှေလှိုင် သို့ ကိုချိုကြီး (ခ) ကိုဖရယ်ဒီအောင်သန်း ၏ညီမ မမသင်း မှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ - ၂
by Thinn Thinn Win on Tuesday, January 8, 2013 at 7:50pm ·
You, Ko Lin Wai Aung, Nang Aung Htwe Kyi, Kyaw Gyi AB and 41 others like this.
Aung Moe Win ကဲ ခင်ရွှေလှိုင်- နင့်နောက်ကျောကို စောင့်ကန်လိုက်ရင် ဘယ်သူကျွေးတဲ့ ထမင်းတွေ ရှိသလဲ-- စဉ်းစား-- စဉ်းစား--
January 8 at 9:31pm · Unlike · 9
Soe Lynn စစ်အာဏာရှင် ရှိနေသရွေ့၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာမရှိသောအစိုးရတရပ် ရှိနေသရွေ့ ၊ ဒီမိုကရေးစီ စစ်စစ်မရသေးသရွေ့ တည်ရှိနေသင့်သော လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတခုအဖြစ်လဲမြင်မိတယ်.. ။ ဒါပေမဲ့ AB ကိုသန့်ရှင်းစေချင်တယ်.. သွေးစွန်းနေတဲ့ AB သမိုင်းအမှန်ကို ဖော်ထုတ်ပါ.. ၊ ၀န်ခံပါ.. ၊ ရိုးသားပါ..၊ အပြစ်ရှိသူ ရာဇ၀တ်ကောင်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး စည်းခြားပါ....
January 8 at 11:17pm · Like · 14
Maung Than Swe ဆက်ဖြန့်လိုက်ပါတယ်။
January 8 at 11:44pm · Like · 1
Shwe Thwe မမသင်းနဲ့ထပ်တူပါဘဲပြည်တွင်းကလေသံပစ်နေတဲ့
January9at 9:22am via mobile · Like · 3
San Dar မမသင်း:အခုလဲ တန်ဖိုးထားဆဲ.. ၊ သံယောဇဉ်ကြီးနေဆဲပဲ.. ငါကိုယ်တိုင်လဲ AB ကိုစိတ်မနာနိုင်သေး.. သိက္ခာရှိသော ABSDF အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်နဲ့ ဆက်လက်တည်တံ့စေလိုတဲ့ သဘောထားက အမှန်တရားလိုလားတဲ့ AB တွေနဲ့တထပ်ထဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိတယ်... ။ လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားသော AB အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့အတွက် သမိုင်းအမဲစက်ဖြစ်တဲ့ ABSDF မြောက်ပိုင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကြီးကို ဖော်ထုတ်ပေးရေးက လက်ရှိ ABSDF ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ AB အဟောင်း ၊ အသစ် တွေသာမက အမှန်တရားလိုလားသူ အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ ယူဆမိတယ်...။
January9at 1:45pm · Edited · Like · 7
Than Win ကြောက်စရာ ၊အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ကျေးဇူးတရားကိုစော်ကားဝံ့သူတွေပါလား..
January9at 2:14pm · Like
Soe Win ဟေလူဘာတွေအံ့သြနေတာလဲ
January 10 at 12:15pm · Like
Kotoe NB ကဲ...မခင်ရွှေလှိုင်ရေဘာဆက်လုပ်မလဲ
၄၀၁ ကအတူလာခဲ့တဲ့ ၇ ယောက်မှာ
January 11 at 10:51pm via mobile · Like · 1
ဘရာဇီး ငှက်ရိုး တမာခင်ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ပြန်စာရေးလိုက်ပါသတဲ့ခင်ဗျာ...
Studied at Mandalay UniversityLives in Melbourne, Victoria, AustraliaFemale
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 9:49 PM